အုန်းစိမ်းဆွမ်းမွှေးကျောက်ကျော/Shredded coconut with Pandan flavoured Agar-Agar | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
အုန်းစိမ်းဆွမ်းမွှေးကျောက်ကျော/Shredded coconut with Pandan flavoured Agar-Agar
ဆွမ်းမွှေးကျောက်ကျောကို သမီးရက် ၁၀၀ ပြည့်ပွဲ 2009 မှာလုပ်ပြီး ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်တုန်းကပုံကို Facebook ထဲမှာတွေ့ပြီး Fb ထဲက မိတ်ဆွေ ညီမတယောက်က လုပ်နည်းပြပါဆိုလို့ပါ။ လုပ်ထားတာ စနေနေ့ ညကတည်းကပါ။ အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး Post မတင်ဖြစ်ဘူး။ စနေနေ့ညကလဲ သူငယ်ချင်းမွေးနေ့သွားရပါတယ်။ အပြီးမှာအိမ်မပြန်ပဲ သူငယ်ချင်း ဝသာန်အိမ်မှာ ညမိုးချုပ်ထိနေပြီး အမျိုးသား အလုပ်ပြီးမှ ဝင်ခေါ်ခိုင်းထားတာပါ။ သူ့အိမ်မှာ post တင်မယ်ပေါ့လေ။ ကိုယ်သုံးတတ်တဲ့ Computer အဟောင်း ဂျိုကျိုးနားရွက်ပဲ့လေးယူသွားရင် အရှက်ကွဲပါမယ်လေ ဆိုပြီး ကိုထက် Computer အသစ်လေး ယူသွားပြီးကြွားမိပါတယ်၊ သူ့အိမ်က WiFi နဲ့ဘယ်လိုဆက်ရမှန်းမသိလို့ ပိတ်ပြီး စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ လိုက်တာမနက် ၃နာရီထိုး ကိုထက် လာခေါ်မှရပ်သွားကြတယ် တနင်္ဂနွေနေ့ကြတော့လဲ FAMILY DAY OUT ဖြစ်သွားပြန်ရော၊ ဒီနေ့ မနက်လဲ အစောကြီး အလုပ်သွားရတော့ ခုပြန်ရောက်ရောက်ချင်း တင်လိုက်တာပါ။
One of my friends in Facebook has seen the photo of this coconut Agar which was served to the monks for 100 days birthday for my daughter in 2009, and she asked forarecipe and here isareason for this posting. I have done this since Saturday but been busy and had to go my friend’s birthday. I didn’t go back home straight after the party and followed to my friend, Wathan and stayed at her place until my husband picked me up when he finished his work. I was trying to post it at my friend’s house but my old lap top was left at home in order to show off Ko Htet’s new lap top which I have no idea how to connect to Wi-Fi. So we hadachit-chat about this and that only to be stopped when Ko Htet picke up around3am. On Sunday, it wasafamily day out. This Monday morning , I had to go work so I can only post it when I got back.
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (အလျား ၈လက်မ၊ အနံ၅လက်မ၊ အနက် ၃လက်မ မုန့်ဗန်းအတွက်) အချိုပွဲ ၅ပွဲစာ
-တယ်လီဖုန်းတံဆိပ် အာဂါကျောက်ကျောထုပ် အမှုန့်၁ဝက်
-သကြား ၂၅၀ ဂရမ်၊ ချိန်စရာမရှိရင် ဟင်းခပ်ဇွန်းနဲ့၅ဇွန်းပေါ့နော်
– ဆွမ်းမွှေးရည် ၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)
Contents (LxWxH-8″x5″x3″) for5servings
– halfabag of Telephone Brand Agar powder
-2 ltrs of water
-250g of sugar which is about5curry spoons
-1 can of fresh shredded coconut
-1tbl spoon of pendan paste
အာဂါကျောက်ကျောအမှုန့်၁ဝက် ကိုရေ၂လီတာထဲ့မီးအနေတော်နဲ့ကျိုပါ။ ကျိုနေရင်းနဲ့ သကြားထဲ့ပါ။ မွှေနေသောဇွန်းမှာ ကျောက်ကျောမှုန့်လေးများကပ်မနေတော့ရင် ကျောက်ကျောများသေချာပျော်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
Boil half the spoon of Agar powder with2ltrs of water then add sugar. The mixing ladle has no residue of Agar then it is dissolved.
အုန်းနို့ ၃ပုံ၁ပုံထဲ့မွှေပါ။ ကျောက်ကျောရေ ကြွက်မြီးတန်းအနေလောက်ရလာရင် မုန့်ဗန်းထဲ ကို ကျိုထားသောအရည်တဝက်ခန့်ထဲ့ပါ။ ကျိုရေထဲ့ပြီး ပြီချင်း အုန်းစိမ်းဖတ်လေးများ လိုသလောက်ဖြန့်ထဲ့ပါ။ အပေါ်ရေတင်:သည်အထိခဏအအေးခံထားပါ။
1/3 of coconut milk is added and mixed. Once liquid thicken, pour half of it into the baking tray. Then the required amount of shredded coconut can be spread on top of it. Let it cool down until the surface got toughened.
အပေါ်ရေတင်းပြီဆိုရင် ခုဏကချန်ထားသောအိုးထဲက ကျောက်ကျောရည်များကို( အနဲငယ်ခဲနေပါမယ်၊ပူစရာမလိုပါ) ရေအနဲငယ်ထဲ့ကာ အပူပေးပြီးပြန်ကျိုလိုက်ပါ။ကျောက်ကျောရည်များအရည်ပြန်ပျော်လာပါမယ်။ ချန်ထားသောအုန်းနို့ ရေများထဲ့ပါ။
The rest of the Agar liquid ( might beabit solid, don’t worry) is added with some water and boil it again. Then add the rest of coconut milk into it.
ဆွမ်းမွှေးရည် ၁ဇွန်း ထဲ့မွှေပါ။ တဖန် ကြွက်မြီးတန်းအနေလောက်ရလာရင် အအေးခံထားသောမုန့်ပေါ်ကိုလောင်းထဲ့ကာအအေးခံထားပါ။
Add 1tbl spoon of Pendan paste and boil it until it got toughened then pour it on top of the cooled down Agar in the baking tray and let it cool down again.
ကျောက်ကျောလေးများ အေး၍ခဲသွားရင် လှီးစိတ်စားသုံးလို့ရပါပြီ။ အရသာ ချိုမြိန်ကာရနံ့မွှေးသောဆွမ်းမွှေးအုန်းနို့ကျောက်ကျောလေးရပါပြီ.
Once the Agar is cold and solid then you can cut to your favourite sizes and enjoy this sweet and lovely fragrance of shredded coconut with pendan flavoured Agar-Agar.
10 comments on “အုန်းစိမ်းဆွမ်းမွှေးကျောက်ကျော/Shredded coconut with Pandan flavoured Agar-Agar”
26/03/2012 @ 8:43 pm
26/03/2012 @ 11:25 pm
kyay zuu par ma yay 🙂
27/03/2012 @ 3:06 am
27/03/2012 @ 5:44 pm
pls say happy birthday to thar thar naw:)
27/03/2012 @ 3:38 am
ma ei thet…………..
thx naw………i wil try mal naaw……….
31/03/2012 @ 4:45 am
31/03/2012 @ 10:45 pm
28/06/2012 @ 8:12 pm
thanks for sharing. It looks very delicious. May I know where can you buy agar agar ( telephone brand) powder? Thanks.
28/06/2012 @ 10:53 pm
u can get it from thai shop. these r thai products 🙂
29/06/2012 @ 7:42 pm
LeaveaReply to tinzar Cancel reply